Ungashintsha kanjani ideskithophu ku-Windows 11 | Izindaba zeWindows
Ungashintsha kanjani ideskithophu ku-Windows 11
U-Ignacio Sala | | Imihlahlandlela namathiphu, Windows 11
Uma uvamise ukusebenza nohlelo lokusebenza noma ezimbili kakhulu, kungenzeka ukuthi nivule nobabili esikrinini esifanayo, kuyideskithophu efanayo, ngale ndlela. kungadingeki ushintshe phakathi kwamadeskithophu noma ukunciphisa nokukhulisa uhlelo lokusebenza okudingayo ngaso sonke isikhathi.
Kodwa-ke, uma kuziwa ezinhlelweni zokusebenza noma amakhasi ewebhu adinga ububanzi obuningi ukuze akwazi ukubonisa lonke ulwazi olutholakalayo futhi akwenze kube lula ukusebenza nabo, ukukubonisa engxenyeni yesikrini akusona isixazululo. kungcono azisebenzisele ideski.
1 Ayini amadeskithophu kuWindows
2 Ungashintsha kanjani ideskithophu ku-Windows 11
2.1 Ngezinqamuleli zekhibhodi
2.2 Ngebha yomsebenzi
3 Ungawakha kanjani amadeskithophu amasha ku-Windows 11
4 Ungavala kanjani ama-desktops ku Windows 11
5 Ungawaqamba kanjani kabusha amadeskithophu ku-Windows 11
6 Shintsha ukuhleleka kwamadeskithophu ku-Windows 11
7 Hambisa izinhlelo zokusebenza kwamanye amadeskithophu ku Windows 11
8 Shintsha isithombe sangemuva sedeskithophu ku-Windows 11
Ayini amadeskithophu kuWindows
Isixazululo sezikhathi ezithile, noma esivamile kubasebenzisi abaningi abathi ngenxa yokuntuleka kwendawo noma imali abangakwazi ukusikhokhela, sinjalo sebenzisa amadeskithophu amaningi abonakalayo. Ngedeskithophu ngiqonde indawo yesikrini lapho izinhlelo zokusebenza esizivulile zitholakala khona.
Ngenxa yamadeski, singaba nenani elikhulu izinhlelo zokusebenza zivula isikrini esigcwele futhi ufinyelele kuzo ngokushesha futhi kalula ngaphandle kokunciphisa izinhlelo zokusebenza esizisebenzisayo futhi sandise lezo esizidingayo ngaso sonke isikhathi.
Wonke amadeskithophu anesithombe sangemuva esifanayo (yize singawashintsha njengoba ngikubonisa kamuva), okungeyona into engaphezu kwe- Isikrini sokuqala seWindows. Uma sifuna ukuqala ukusebenza njalo ngamadeskithophu, singakwazi:
Shintsha igama elizenzakalelayo. Lokhu kusivumela ukuthi sikhombe ideskithophu ngokushesha lapho sifinyelela ukubuka konke kwedeskithophu.
Shintsha isithombe sangemuva sedeskithophu. Enye inketho esivumela futhi ukuthi sibone amadeski.
Okuhle kunakho konke, Windows 11 inenkumbulo lapho isebenza ngamadeskithophu. Okusho ukuthi, njalo uma siqala ikhompuyutha futhi sivula izinhlelo zokusebenza esizidingayo, lezi sfuthi zizobekwa phezu kwedeski elifanayo lapho sizibeka khona sigcina ukuwavula.
Si sisebenzisa ama-monitor amaningana axhunywe kumishini, Windows 11 izovula izinhlelo zokusebenza futhi izozikhombisa kumamonitha lapho sisebenzise khona izinhlelo zokusebenza. Lokhu ukuthuthuka okuphawulekayo phezu Windows 10 kanye nesici esingatholakali kunoma iyiphi enye isistimu yokusebenza yedeskithophu.
Amadeskithophu abonakalayo awahlukile kuwo Windows 11, njengoba enza singazithola futhi ku-Windows 10, ngakho-ke uma ungazange ube nethuba lokubuyekeza enguqulweni entsha ye-Windows, ungalandela okokufundisa esikubonisa kona kulesi sihloko ukuze shintsha phakathi kwamadeskithophu ku-Windows.
IWindows ibeka esinakho izindlela ezimbili ezahlukene zokushintsha phakathi kwamadeskithophu:
Labo bethu abachitha amahora amaningi phambi kwekhompyutha sebesebenzise izinqamuleli zekhibhodi ze ukushesha esicabangayo lapho senza imisebenzi ephindaphindwayo.
Le misebenzi ephindaphindwayo ingaphazamisa ukugxila kwethu, ngokuhlukanisa izandla zakho nekhibhodi ukuze wenze izenzo ezithile.
Izinqamuleli zekhibhodi ze finyelela kumadeskithophu we-Windows 11, futhi naku-Windows 10, Yilezi:
Ukhiye weWindows + Lawula + umcibisholo wesokudla ukuya kudeskithophu kwesokudla.
Ukhiye weWindows + Lawula + umcibisholo wesokunxele ukuya edeskini kwesokunxele.
Uma sifuna ukufinyelela ekubukeni kuqala kwawo wonke amadeskithophu avuliwe, sizocindezela izinkinobho ze-Windows Key + Tab.
Uma singazithandi kakhulu izinqamuleli zekhibhodi, enye inketho etholakalayo esinayo yokufinyelela wonke amadeskithophu esiwavulile ngebha yomsebenzi.
Kubha yomsebenzi, nje kwesokudla sengilazi yokukhulisa abantwana, isithonjana esiphendula egameni le-Task View siyaboniswa, isithonjana esiyisikwele esihluka kuye ngenani lamadeskithophu esiwavulile.
Ngokuchofoza lesi sithonjana, ideskithophu ngayinye esivule kuyo Windows 11 izovezwa.
Lo msebenzi iyatholakala futhi ku-Windows 10, kwesokudla sebhokisi losesho futhi iphendula incazelo efanayo: Ukubuka komsebenzi.
Ungawakha kanjani amadeskithophu amasha ku-Windows 11
Dala ideskithophu entsha ngenqubo elula kakhulu futhi esheshayo, ngakho-ke uma uzibuza mayelana nokwenzeka kokuqala ukuzisebenzisa, ngokuqinisekile uzozama.
para dala amadeskithophu amasha ku Windows 11, sizokwenza izinyathelo engikubonisa zona ngezansi:
Chofoza inkinobho Ukubuka komsebenzi (itholakala kwesokudla sengilazi yokusondeza kubha yomsebenzi).
Okulandelayo, siya kudeskithophu yokugcina ebonakalayo yeqembu lethu bese uchofoza Ideskithophu entsha.
Ngomyalo Windows key + Control + D Futhi singakha amadeskithophu amasha ku-Windows 11.
Indlela ye- dala amadeskithophu ku Windows 10 ifana ncamashi neyangaphakathi Windows 11.
Ungavala kanjani ama-desktops ku Windows 11
Uma singafuni ukuqhubeka sisebenzisa noma yimaphi amadeskithophu ahlukene esiwadale ngaphambilini, uma singafuni ukulahleka phakathi kwamadeski size sifike kulokhu esikudingayo, okungcono kakhulu esingakwenza wukuqeda.
para susa / vala ideskithophu ku-Windows 11, kufanele:
Chofoza inkinobho Ukubuka komsebenzi ukukhombisa wonke amadeskithophu.
Ngemuva kwalokho sibeka igundane kudeskithophu esifuna ukuyivala futhi silinda kuze kube u-X uboniswa ekhoneni eliphezulu kwesokudla sedeskithophu.
Ukuvala ideskithophu, sicindezela u-X.
Windows ngeke isibuze ukuthi siqinisekile ukuthi sifuna ukuyivala, njengoba, uma ubonisa noma yiluphi uhlobo lokuqukethwe, luzovezwa kudeskithophu enkulu.
Indlela ye- vala amadeskithophu ku Windows 10 ifana ncamashi neyangaphakathi Windows 11.
Ungawaqamba kanjani kabusha amadeskithophu ku-Windows 11
Ngaso sonke isikhathi lapho sakha ideskithophu entsha, iWindows 11, iwafaka izinombolo: Ideskithophu 1, Ideskithophu 2, Ideskithophu 3 ... Qamba kabusha amadeskithophu Kuzosivumela ukuthi sibone ngokushesha okuqukethwe (izinhlelo zokusebenza) esikubeke kukho.
para qamba kabusha amadeskithophu ku Windows 11 senza lezi zinyathelo ezilandelayo:
Nakulokhu, chofoza inkinobho Ukubuka komsebenzi.
Ngemuva kwalokho siya egameni ledeskithophu ukuthi sifuna ukushintsha bese uchofoza kukho.
Ngaleso sikhathi igama ledeskithophu ekhethiwe lizovezwa, ukuze kuthi lapho ubhala, isuswe ngokuzenzakalelayo.
Indlela ye- qamba kabusha ideskithophu ku Windows 10 ifana ncamashi neyangaphakathi Windows 11.
Shintsha ukuhleleka kwamadeskithophu ku-Windows 11
Ukushintsha ukuhleleka kwamadeskithophu kulula njengokuthi cindezela kudeskithophu esifuna ukuyihambisa futhi ngaphandle kokuyikhulula, idonsele endaweni esifuna ibe nayo.
Ngeshwa le nketho AYItholakali ku-Windows. 10.
Hambisa izinhlelo zokusebenza kwamanye amadeskithophu ku Windows 11
Uma usuhlele ideskithophu yakho ngezinhlelo zokusebenza ozidingayo kuzo zonke, kodwa usushintshe umqondo wakho, ungashintsha ngokushesha izinhlelo zokusebenza phakathi kwamadeskithophu.
para hambisa izinhlelo zokusebenza kusuka kudeskithophu eyodwa kuya kwenye Windows 11, siqhubeka kanje:
Sithola ifayela le- Ukubuka komsebenzi.
Okulandelayo, siya kudeskithophu lapho itholakala khona isicelo esifuna ukusihambisa.
Okulandelayo, sibeka igundane phezu kwalolu hlelo lokusebenza futhi sayihudulela edeskini lapho sifuna ukuthi iboniswe khona.
Indlela ye- hambisa izinhlelo zokusebenza phakathi kwamadeskithophu ku Windows 10 ifana ncamashi neyangaphakathi Windows 11.
Shintsha isithombe sangemuva sedeskithophu ku-Windows 11
Shintsha isithombe sangemuva sedeskithophu ku-Windows 11 ifana ncamashi neyangaphakathi Windows 10.
Nokho, kufanele sikukhumbule lokho ngenkathi siphakathi Windows 11 ideskithophu ngayinye inobunikazi bayo, okungukuthi, ingase ibe nesithombe sangemuva esihlukile, ku-Windows 10 akunjalo.
Uma sishintsha isithombe sangemuva sedeskithophu ku Windows 10, Lokhu kuzoshintshwa kuwo wonke amadeski esiwavulile.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zeWindows » General » Imihlahlandlela namathiphu » Ungashintsha kanjani ideskithophu ku-Windows 11
Ungakuphoqa kanjani ukuthuthukela ku-Windows 11 kunoma iyiphi ikhompyutha ye-Windows 10
Ungalanda kanjani futhi ufake iWindows 11